माया प्रेमका कुरा - Everest Daily News
माया प्रेमका कुरा
लिला बास्तोला (एल.वि.)
प्रेमलाई जसरि अर्थ लगाइए पनि वास्तवमा त्यसको यथार्थ चाहि एउटै हुन्छ, त्यो हो भित्रि ह्दयदेखि गरिने आत्मिय मिलन । वास्तवमा स्वच्छ ह्दयबाट प्रस्फुटित भावनात्मक तरङ्ग नै प्रेम हो । त्यस्तै कसै कसैले चाहि ईस्वरीय देन वा प्राकृतिक बरदानलाई पनि प्रेम भन्ने गरेका छन् । विश्वको एक सर्वेक्षणले प्रेमलाई विशेषत दुई कोणबाट हेरिन्छ भनेको छ र ती हुन् ‘सेक्स प्रेम र ‘भावनात्मक प्रेम । सेक्स प्रेम केवल शारीरिक आसक्ति वा अभिव्यक्ति मात्र हो भने भावनात्मक प्रेम चाहि भित्रि अन्तर ह्दयबाट वा मनद्वारा गरिएको अभिव्यक्ति हो ।
कुनै पनि युवतीको रुप, गुण र स्वभाव जस्ता कुराहरुबाट प्रभावित भई उनीप्रतिको प्रगाढ मोह वा आस्था दर्शाउनुलाई प्रेम भनिन्छ । बुझने भन्ने हो भने, दुई आत्माबीचको असल मिलनविन्दु नै प्रेम हो । यहि प्रेमलाई विभिन्न मानिसले फरक–फरक कोणबाट परिभाषित गर्ने गरेका छन् । कसैले यसलाई आन्तरिक प्रेम र कसैले चाहि बाह्य प्रेम भनेका छन् । वास्तवमा भित्रिमनद्वारा गरिएको प्रगाढ मायाको तरङ्ग वा छाल नै भित्रि वा भावनात्मक प्रेम हो, र त्यो कुनै पनि व्यक्तिको भित्रि मनबाट नै प्रस्फुटित हुन्छ । यसप्रकारको प्रेमलाई प्रायः तुलनात्मक रुपमा हेर्न सकिदैन । प्रेमको विषयमा भन्नुपर्दा प्रायः यो २०/२५ वर्ष उमेर समूहका केटा वा केटीहरुले यसलाई थप उर्जाको साधनको रुपमालिंदै जीवनमा अघि बढ्ने बाटो पनि तय गर्दछन् । एक अर्काको मायाको बन्धनलाई थप कसिलो र दरिलो पार्न माया र प्रेममा पौडि खेल्नेहरु अनेक उपायहरु गर्दछन् । यो उमेरमा अति कठोर मन पनि भाबुक वा कोमल भइदिन्छ र रातमा निद नआउने तथा दिनमा भोक नलाग्ने भइदिन्छ ।भनिन्छ प्रेमबिनाको जीवन अर्थहीन हुन्छ । जसले प्रेम दिन र लिन जानेको हुन्छ, उसले वास्तविक प्रेम के हो र यसको परिभाषा के हो भन्ने पनि बुझेको हुन्छ र उसको जीवन पनि
बसन्तऋतु जस्तै हमेसा हराभरा भइदिन्छ । त्यस्तै जसले प्रेमको अर्थ वा परिभाषा बुझदैन र जो व्यक्तिमा प्रेमको अभाव खड्किएको हुन्छ अर्थात् जो प्रेमबाट टाढा छ, उसलाई प्रेमको वास्तविक परिभाषा थाहा हुदैन । यस्तोबेलामा ऊ अलिक अस्वभाविक, हिंस्रक हुन्छ र उसले समाजमा विभिन्न बिक्रितिहरु फैलाउन सक्छ । भनिन्छ जुन समाजमा प्रेमको अभाव खड्किरहन्छ त्यहा असाहय मानव सेवा, धर्म भन्ने कुरै हुदैन रे । असाहय मानव सेवा नै प्रेमको सुगन्ध हो रे, त्यसैले जो व्यक्तिले प्रेमलाई वास्तविक रुममा नै बुझेर त्यस अनुरुप नै आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउने सोच गर्छ, त्यहिनेर प्रेमको वास्तविक र सरल परिभाषा निस्किन्छ ।
आजभोलि विश्वमा नै यस्तो भईरहेको छ कि, मानिसहरु प्रेमलाई केवल सेक्सको रुपमा मात्र हेर्ने अनि त्यो भन्दा पनि अघि बढ्न खोजेको देखिनछ । उनीहरुको मन करुणामय प्रेमतिर नभई केवल नकारात्मक त्यहि सेक्सतिर मात्र लिप्त हुने गर्दछ , जहा वास्तविक प्रेमको कुनै आभास वा रस नै हुदैन । उनीहरु प्रेम भनेकै त्यहि सेक्स हो भनेर प्रेम र सेक्सलाई एकै नजर लगाउछन् । आज विश्वको यो हावाले नेपाल र नेपालीलाई पनि छोएको छ । जवसम्म आफुलाई आधुनिक भन्न रुचाउने युवा वा युवतीहरु वास्तविक प्रेम र वास्तविक सेक्स के हो भन्ने कुरामा अनविज्ञ नै हुन्छन् तबसम्म वास्तविक प्रेमको परिभाषा भेटाउन गाह्रो हुन्छ ।
उनीहरु बाहिरिरुपबाट सेक्समा त आकर्षित होलान् तर उनीहरु भित्रिमनबाट गरिने प्रेममय माया र पवित्र प्रेमबाट टाढै हुन्छन् । उनीहरुमा यो मात्र ज्ञान हुन्छ कि, सेक्स शारीरिक सम्भोगको प्राप्ति मात्र हो । शारीरिक रुपमा सम्भोग गर्यो, आफु तृप्त भइदियो वस त्यतिनै । उनीहरुले भित्रि मनबाट मन्द गतिमा बहने पवित्र प्रेमलाई बुभ्दैनन् र बुझने कोशिष नै गर्दैनन् । यदि भावनात्मक प्रेममा उनीहरुको दृष्टि गइहाले पनि त्यहि दमित सेक्समा नै उनीहरुको भित्रि मन केन्द्रित रहन्छ । दमित सेक्सले क्षणिक रोमान्स र आनन्द त दिन्छ नै, भावनात्मक प्रेम पनि थोरबहुत स्थापित होला, तर त्यसरि वास्तविक प्रेममा पुग्न सकिदैन र त्यसरी वास्तविक प्रेमको परिभाषा पनि निस्कदैन । प्राचीन युगका मान्छेहरुले पनि त्यही भावनात्मक प्रेमलाई नै वास्तविक प्रेम मान्थे र सेक्सलाई प्रेमलाई फलाउने पूलाउने र हुर्काउने साधनको रुपमा मात्र हेर्ने गर्थे भने आजको २१ औं शताव्दिको यति धेरै चेतनशील र सभ्य युगमा चै किन प्रत्येक मान्छेको दृष्टि एकोहोरो रुपमा त्यही सेक्सतिर मात्र लिप्त हुन्छ ? यो आज आम जनचासोको विषय बनेको छ ।
महिला हिंसा र विभेदविरुद्धका घट्नाको विरोधमा काठमाडौंमा प्रतिकात्मक शव र मलामीसहित महिला मार्च (फोटोफिचर)
उर्लाबारीमा ग्याँसको मूल्यमा मनपरी, उपभोक्ता मारमा
भोजपुरबाट धरान जाँदै गरेको ट्रकमा खैरो हेरोइन भेटिएपछि बरामद
अनुमतिबिना अरुको फोटो, भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्नेलाई कारबाही